Ungayicoca njani ngokufanelekileyo ikhaya lakho ngeXesha lokuqiniseka
BPhambi kobhubhani we-coronavirus, uninzi lwethu kuye kufuneke ukuba sicoceke amakhaya ethu rhoqo ngeMigqibelo kuba besixakeke kwezona veki. Ngoku ekubeni uninzi lusekwimo yokuzimela yodwa ngenxa yokuvalwa kwehlabathi, sinexesha elingakumbi ezandleni zethu ukucoca amakhaya ethu. Kwaye kufuneka senze yonke into esemandleni ethu ukuze sihlale sikhuselekile.
Ukucoca kungangumsebenzi otyhafisayo ingakumbi xa uhlala endlwini enkulu nabantwana. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ucoceke emva kwabo ngalo lonke ixesha ubona njengoko ikhaya lakho ngoku lilixesha lesikolo, iofisi, ibala lokudlala, njalo njalo. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ukhuphe intsholongwane kuwo wonke umhlaba amaxesha ngamaxesha kunokuba ubuya kwenza njalo. Ukucinga nje ukuba ungagcina njani ikhaya lakho licocekile, lingasasebenzi intsholongwane, kwaye licocekile linokukuqhubisa ukuba uphambane kodwa sibeke uluhlu lweendlela zokunceda ukugcina ulwazelelo lunye nokububeka emva kokuvalelwa kobomi kulawuleka.
Ukucoca okusebenzayo, qala ukhuphe phantsi umphezulu ukuze ususe ubumdaka kunye nobumdaka. Emva koko landela nge-sanitizer okanye isibulala-ntsholongwane, esifana neDettol, Clorox, iLysol yokutshiza okanye ukusula.
Eyona nto iphambili ekucoceni ikhaya lakho ngokuphumelelayo ngeli xesha kukutya isidlo sakusasa phantsi kwemisebenzi. Kukho iindawo ezithile ezifuna ukuba uzihlambulule yonke imihla kwaye ezinye unokufuna ukutyelelwa kanye ngeveki okanye ngenyanga. Oku kuyanceda ukwenza lula inkqubo.
Nazi ezinye iindlela zokucoca ikhaya lakho ngexesha lokuvalelwa wedwa…
# 1. Iindawo zokucoca yonke imihla
Umphezulu ochukumisa amaxesha amaninzi ngemini kufuneka ucocwe imihla ngemihla. La mabala abandakanya ii-doorknobs zakho, izibambo zefriji, umphezulu weetafile, izitulo, izibambo ezitshileyo, izibane ezikhanyayo, ii-nighttands, ulawulo olukude, iithoyi zabantwana, ifowuni, iiqhosha zekhompyuter, izitshixo, iiwotshi kunye nemikhono.
# 2. Iindawo zokucoca kanye ngeveki
Veki nganye, kuya kufuneka ukhuphe i-rugs, ukhukulise kwaye ukhabe umgangatho nge-1/3 ikomityi ye-blach nganye nge-gilon, ukuze ukhuphe isibulala-ntsholongwane, ngokwe-CDC kwaye kuya kufuneka unxibe imask xa unobunzima bokuphefumla. Izinto ezifakwe kwifriji yakho, iicouasters, i-microwave, igumbi lokuhlambela, isinki, iifestile, iishelufa zeencwadi, umabonwakude, izikrini zekhompyuter, iibhodi zezitshixo, kunye neekhabhathi kufuneka zisuswe phantsi ngesibulala-ntsholongwane.
# 3. Iindawo zokucoca kanye ngenyanga
Kanye ngenyanga, kufuneka ucoce zonke iifestile kunye neengcango nge-isopropyl yotywala xa zingcolile. Hlamba isigqubuthelo sakho sebhedi, i-duvet, kunye ne-vacuum nayiphi na i-upholstery.
Unokufumana iingcebiso ezininzi zokucoca Apha.
Ukucoca ikhaya lakho ngokufanelekileyo Indlela yokucoca ikhaya lakho Uyicoca Njani Ngokunempumelelo ikhaya lakho ngexesha lexesha lokuqiniseka Ikota yekhaya lakho
titi Dokubo Ngamana 23, 2020